Yakadhindwa Matter Testing Instrument Factory - China Yakadhindwa Matter Testing Instrument Vagadziri, Suppliers
Iyo SP yakatevedzana X-Rite spectrophotometer inotora ichangoburwa uye yakanyanya kunaka yekudzora ruvara tekinoroji nhasi.Chiridzwa chacho chinobatanidza mabasa akasiyana-siyana ekuyera mavara nekushanda kwepamusoro uye nepamusoro-soro, kuve nechokwadi chokuti iwe unosvika pakukosha kwakakodzera mubasa rekudhinda mavara.
X-Rite's new 500 series Chinese display spectrodensitometer inotora tekinoroji yekugadzirwa kweyepamusoro inonzwa kuti ipe inotakurika spectrodensitometer ine chaiyo yepamusoro uye nemazvo.
DRK118B Inotakurika 20/60/85 Gloss Meter
DRK118B imhando nyowani yemhando yepamusoro-chaiyo yehungwaru inoedza iyo kambani yedu inotsvagisa uye inovandudza zvinoenderana nemitemo yenyika uye inotora yemazuva ano madhizaini edhizaini uye tekinoroji yekugadzira komputa yekungwarira uye inonzwisisika dhizaini.
DRK118A Imwe Ngoro Inopenya Meter
Iyo girazi gloss mita inonyanya kushandiswa kuyera kupenya kwependi, bepa, plastiki, fenicha yehuni, ceramics, marble, ink, aluminium alloy uye aluminium oxide pamusoro uye zvimwe zvigadzirwa zvakafuratira.
A stroboscope inonziwo stroboscope kana tachometer.Iyo stroboscope pachayo inogona kuburitsa pfupi uye kazhinji inopenya.Iyo dhijitari chubhu inoratidza huwandu hwekupenya paminiti munguva chaiyo.Idiki muhukuru, chiedza muhuremu, chakapfava muchiedza, chakareba muhupenyu hwemwenje, chiri nyore uye chiri nyore kushanda.
DRK102 Inotakurika Kuchaja Stroboscope
DRK102 inotakurika rechargeable stroboscope, inotakurika rechargeable stroboscope mugadziri, inotakurika rechargeable stroboscope mutengo, inoshandiswa mu: kucherechedzwa kwezvinhu zvinomhanya zvakanyanya, kuruma kwegiya uye kuchinja!